Thulani Mpofu archive - The National
Thulani Mpofu Archive
Zimbabwe off target for World Cup
For the past four years, the buzzword in southern Africa has been "Fifa" as the region prepares to host the event. Read Article Zimbabwe off target for World Cup
Mugabe's Zanu-PF weeds out dissenters
Restructuring exercise promotes loyalists while those of suspect loyalty are being purged, further stoking factional tensions. Read Article Mugabe's Zanu-PF weeds out dissenters
Zimbabwe's farmers face barren times
Since Robert Mugabe began his campaign of seizing white-owned farmland, there has been a struggle with agriculture. Read Article Zimbabwe's farmers face barren times
Some veterans refuse to fight on for Mugabe
PF-Zapu militants who took on the role of the Zimbawe president\_s violent enforces say they have been abandoned by the ruling party. Read Article Some veterans refuse to fight on for Mugabe
Workers fret as cash crunch forces gold mines to close
Labourers are deprived of wages as production declines following the Zimbabwean reserve bank's failure to pay mining firms for deliveries. Read Article Workers fret as cash crunch forces gold mines to close
Deadly cholera epidemic strikes Harare
Streams of raw sewage and lack of clean water add to woes in the capital of crisis-stricken Zimbabwe. Read Article Deadly cholera epidemic strikes Harare
Simba Makoni, a former minister, launched his bid for the country's presidency in February but his party remains invisible. Read Article Zimbabwe's 'Dawn' fails to rise
Funds crunch stalls housing project
An ambitious nationwide housing project in Zimbabwe that followed an unpopular government order to demolish urban slums has stalled because of lack of funds. Read Article Funds crunch stalls housing project
No Christmas joy for Zimbabwe
Cornmeal porridge replaces day-long banquet in a country badly hit by cholera crisis, hunger and the world's highest inflation rate. Read Article No Christmas joy for Zimbabwe